Hery - Tsiky dia ampy | Desambra 2009
Video firariantsoa avy aminay
2009-12-24 @ 21:37 in Izaho sy ny ahy
Ity sarimihetsika kely ity no entinay telo mianaka miarahaba anao sy ny ankohonanao amin'izao fahatongavan'ny Noely 2009 izao. Efa reradreraka ihany i Aina vao vita ilay video ka somary nitomany izy amin'ny farany. Mirary soa sahady ihany koa amin'io taombaovao 2010 io. Samy hoambinin-java-manasatra, hahita ny soa sy ny mamy daholo.
Hery sy Hanta ary Aina
Ny fotoana italiana
2009-12-22 @ 07:57 in Izaho sy ny ahy
Mbola resin'ny Italiana ny Malagasy raha resaka fotoana... ilay hoe fotoan-gasy. Resaka fitaterana izay hitako isanandro isanandro dia ny 80% n'ny fiaran-dalamby raisiko no tara mihoatra ny 5 minitra. Omaly ohatra dia tara 15 minitra ny fiara tokony ho nandehanako nody omaly hariva avy niasa. Dia teo ampiandrasana nivezivezy tao anaty gara tao aho no gaga tampoka nahita fa nisy fiara hafa koa tara 175 minitra be izao. Tsy naharitra aho dia naka sary mihitsy.
Ny tena mandreraka dia tsy mba misy mimenomenona izany mihitsy ny olona aty rehefa tara... kanefa raha himenomenona amin'ny zavatra hafa tsy dia misy dikany tahaka ny inona. Asa, mety hakamoana ny hiasa sns angamba. Nisy fotoana aza, tamin'iny vakansy lehibe iny, nandeha tany Torino izahay dia tara 45 minitra, dia nandeha nanao fitarainana sy naka remboursement, dia gaga daholo ny olona hoe azo atao kay izany. Tsy vakiny akory ny filazana ao anatin'ny tapakila hoe raha vao tara mihoatra ny 30 minitra ny fiara dia afaka mamerina ny ampahany amin'ny saran-dalana ny tomponandrikitra.
Aina miomana ho amin'ny Noely
2009-12-20 @ 21:28 in Izaho sy ny ahy
Paozy maro be an'i Aina miomankomana amin'ny fankalazana ny Noely. Nanatrika ny fety niraisan'ny Malagasy teto Italia izahay androany dia nanomana ny akanjo hoentin'i Aina. Nanendrika azy ilay dadabe noely kely :-)
Folo andro mahery aho izay no nanao veloma ny FB (FB sisa no iantsoako an'io loll). Nisy ihany ny namako gaga sy nalahelo :-)... ahoana koa hono izany hoe mafana fo be izany dia avy eo tonga dia miaps'. Ny sasany tsy mino, tsy vitako hono izany. Ny sasany niahiahy, fa nisy inona hono... afera privée sa nanao fika maizina. Fa be dia be koa no tsy niraharaha sy tsy nivakl... soa ihany fa misy ireo :-) (tohiny)
Namokatra ny taona 2009
2009-12-10 @ 16:54 in Izaho sy ny ahy
Na teo aza ny krizy ekonomika iraisam-pirenena, na teo aza ny black monday sy ny "Phénomène" Rajoel, na dia teo aza ny horohorontany mafy tao L'Aquila teto Italie, na dia teo aza ny fahafatesan'i Michael Jackson, na dia tsy lany tamin'ny "Grande Fratello 9" aza i Christina Del Basso (sipa be entana), sns sns. Dia mbola azoko lazaina hoe namokatra ihany ity taona 2009 ity.
Tamin'ity 2009 ity tokoa no nisy olom-pantatro be indrindra bevohoka sy teraka. Tao amin'ny fianakaviana akaiky (izahay mianadahy iray tam-po) fotsiny dia efa nisy zaza 3 teraka. Ankoatry ny cousines sy ny tantines sns (2 no fantatro). Toa izany koa ny avy amin'ny fianakavian'ny vadiko, cousines maromaro samy niteraka tamin'ity taona ity (3 no fantatro). Dia eo koa ny namana akaiky na any Dago (2 no fantatro) na ny aty andafy (2 no fantatro teraka ary ny 1 mbola ho avy atsy ho atsy). Na ny mpiara-monina eto Italia (3 no henoko hatramin'izao)... na ny eo amin'ny serasera (misimisy ihany).
Raha atotaly dia any amin'ny 20 any ny zaza teraka misy ifandraisana mivantana na ankolaka amiko... ka tsy izany ve no tena mamokatra? :-)
Dia irariana mba hihoatra an'io amin'ny taona ho avy :-) Mazotoa mamokatra.